Oovimba beDOGE - Iphepha 6 lesi-6
IDogecoin (DOGE) Imizabalazo engezantsi kwe- $ 0.055, ijongene nolunye uLuhlu
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 0.09, i-$ 0.10, i-$ 0.11
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.03, $ 0.02, $ 0.01
Ixabiso leDOGE ikwindlela esecaleni. I-crypto iye yaguquguquka phakathi kwe- $ 0.040 kunye ne-0.060 yeedola. Ixabiso le-DOGE libonakaliswe ngeziphatho zezibane ezincinci zomzimba ezizezi ziDoji kunye neentloko ezijikelezayo. Ezi zibane zibonisa ukuba abathengi kunye nabathengisi abayi kugqitywa malunga nolwalathiso lwentengiso. I-crypto idibanisa kuluhlu. Imakethi ikwixabiso lentengo. UDogecoin akazange aqhubeke ukusukela ngoFebruwari.
Ixabiso le-DOGE likwinqanaba lama-49 laMandla aNxulumene naMandla ixesha 14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijike ngokuthe tyaba zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto isezantsi. Ixabiso le-crypto lilungiswe phezulu kodwa lijamelene nokuchasana kwinqanaba le- $ 0.055. Ukuhla ezantsi kunokwenzeka ukuba kuqhubeke. Ngeli xesha, nge-23 ka-Matshi i-downtrend, umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya inqanaba lokuphinda kubuyiselwe i-Fibonacci 61.8% Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwa kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Ixabiso eliphantsi le- $ 0.048.
I-DOGE ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi.
IDOGE isehlokweni esezantsi. Ixabiso le-crypto lijongene nokwaliwa kwi- $ 0.055. Ukunyuka kwengqekembe phezulu kuyathandabuza ngaphezulu kwe- $ 0.055. I-altcoin inokuhla emva kokwaliwa kaninzi kwindawo ephezulu yamva nje. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-DOGE izakwehla iye kwinqanaba elingu-1.618 leFibonacci okanye kwindawo ephantsi ye- $ 0.048.
IDogecoin (DOGE) ijongene nokwaliwa kwi $ 0.060 Resistance, Plunges To $ 0.0512 Support
Ukuhlaziywa: 25 Matshi 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 0.09, $ 0.10, $ 0.11
Ixabiso leDOGE Iwele kwi-0.0512 yeedola ngexesha lokubhalwa. Ukudodobala kubangelwe kukhatywa kwinqanaba lexabiso le- $ 0.060. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, ingqekembe iye yathengisa ngezantsi kwe- $ 0.064 yokuphikisa ngaphezulu. Iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukophula ukuxhathisa okungaphezulu emva kwemizamo emibini engaphumelelanga. Namhlanje, ukwehla kwezulu kunokwenzeka ukuba kuqhubeke.
Ixabiso le-crypto liphule umgca wokuxhasa ishaneli enyukayo. Ngokufanayo, i-altcoin iwele ngezantsi kwee-SMAs. Zonke zibonisa ukuba i-DOGE inokuthi iwele ecaleni. I-DOGE ikwinqanaba lama-43 le-Relative Strength Index isithuba se-14. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla weDowndre kwaye ingaphantsi komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto isezantsi. Kutshanje, ibuyisele kwakhona i-0.056 yeedola ephezulu kwaye yaqala kwakhona ukwehla. Ngeli xesha, nge-23 ka-Matshi i-downtrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-32.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwa kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci. Lelona zantsi $ 0.0435.
I-DOGE ingaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwi-bearish umfutho. Ii-SMAs zijonge ezantsi.
IDOGE isezantsi. Uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba luqhubeke njengoko i-crypto ijongene nokwaliwa kwi $ 0.056. Ingqekembe yehle kwi-bearish mkhuba kwaye inakho ukuqhubela phambili ukuhla.
IDogecoin (Doge) iguquka phakathi kweedola i-0.050 kunye ne-0.060 yeedola, ngoMeyi ungaqhubeka kwakhona no-Uptrend
namhlanje, Inja Ixabiso liyehla emva kokufikelela phezulu kwi-0.059 yeedola. Ngokubanzi, i-altcoin ikulungiso olusezantsi emva kokwehla kwe-15 kaMatshi. I-crypto iwele ezantsi kwi-0.0550 yeedola kwaye yaqala intshukumo ebopha uluhlu. Ingqekembe iyatshintsha phakathi kwe- $ 0.055 kunye ne-0.060 yeedola. I-DOGE iya kuphinda inyukele phezulu ukuba amaxabiso aphule inqanaba lamaxabiso le- $ 0.060. Ngaphandle koko, ukuhla okukhoyo ngoku kuya kuqhubeka.
I-DOGE ikwinqanaba lama-54 leNdawo yamandla esiNxulumeneyo kwisithuba se-14. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgca osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zithambeka ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni.
I-DOGE / i-USD yexesha eliphakathi kwi-bias: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto ibophelelwe ngamanqanaba. Ixabiso kulindeleke ukuba linyuke ukuba ukunganyangeki kwi- $ 0.060 kwaphuliwe. Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi, ikhandlela elibuyise umzimba lavavanya i-8% yeFibonacci level yokubuyisela. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka iye kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci eyandisiweyo. Lelona liphezulu $ 1.618.
I-DOGE ingaphezulu kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Ii-SMAs zijinga phezulu.
I-DOGE isatshintsha-tshintsha phakathi kwe- $ 0.050 kunye ne- $ 0.060. I-crypto isazoqhubeka. I-altcoin inokwenzeka ukuba iqhubeke ukuba amaxabiso aphula uluhlu lwamaxabiso aphezulu. Abathengi bayasokola ukophula ukunganyangeki kwi- $ 0.060.
Iifowuni zika-Elon Musk kwi-Coinbase kuLuhlu lweDogecoin kwiQonga layo
Umphathi we-Tesla u-Elon Musk ubize uCoinbase, olona tshintshiselwano lukhulu lwemali yaseMelika, ukwenza iDogecoin (DOGE) kwiqonga layo kwimpelaveki.
Umnxeba we-tech mogul oya eCoinbase weza njengempendulo yombuzo obuzwe ngumsebenzisi we-Twitter, owathi:
“Molo Elon, ndibone ingxelo yokuba iCoinbase isetyenziselwe ukuthenga iTesla BTC (ukungena okuhle btw). Ngaba ucinga ukuba uCoinbase kufuneka enze iDogecoin kwiqonga labo? Ingavumela abantu abaninzi ukuba bafikelele ngokulula kwi-DOGE. ”
Ngapha koko, uMusk uthumele uthotho lweetweets ejikeleze iDOGE kwimpelaveki. Enye yezi tweets yayiyi-CEO ityhila izicwangciso zayo zokufumana inja yeShiba Inu, uhlobo lwenja olusetyenziswa njengemascot yememor cryptocurrency.
Ngelixa le tweet ingakhange iqhube inyathelo lamaxabiso eDogecoin, yabangela ukuba kufutshane ne-300% yeerali kwixabiso lethokheni yeShiba Inu (SHIB).
Ngeli xesha, uMusk wenze i-tweet malunga neBitcoin ngempelaveki, esithi "I-BTC (i-Bitcoin) ngumzobo we-TBC (iNkampani ekruqulayo) Oku kwenzeka njani!". I-tweet ayinayo nayiphi na impembelelo kwintsebenzo yexabiso le-BTC.
Oko kwathethileyo, ii-tweets ezenziwa rhoqo zikaMusk kunye nezimvo zakhe kwiDogecoin kunye nezinye iingqekembe ziye zafumana abantu abaninzi ekuhlaleni i-cryptocurrency, abaninzi becinga ukuba ii-tweets zakhe zibangela umonakalo omkhulu kwilaphu lendalo elinikwe inqanaba lempembelelo ayisebenzisayo.
Amanqanaba aphambili e-DOGE kuBukela-Matshi 15
I-Dogecoin ibisentabeni engazinzanga okoko yawa kwindawo eyi-0.0400 yeedola ngasekupheleni kukaFebruwari. I-cryptocurrency yenze elinye ilinge lokumelana ne- $ 0.0650 izolo kodwa waxhathisa kakhulu kwaye ukusukela oko wehla ngaphantsi kwenani elijikeleze i-0.0600, kwakhona.
Oko kwathethi, silindele ukubona isaphulelo esivela kumanqanaba exabiso langoku (i-0.0560 yeedola) ukuya kwi-0.0650 yeedola, kwakhona, kwaye ngaphezulu kweeyure kunye neentsuku ezizayo. Nangona kunjalo, isiliphu esingezantsi kwendlela enyukayo inokuvula ngokukhawuleza umnyango oya kwi-0.0500 yeedola.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 0.0600, i- $ 0.0650, kunye ne- $ 0.0700, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0550, $ 0.0500, kunye ne- $ 0.0450.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.70 zezigidi
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 7.2 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 0.4%
tags Cryptocurrency, DOGE, I-DOGECOIN
I-Dogecoin (DOGE) iwa, ngoMeyi uphinde uqalise ukuHamba ngeRange-Bound phakathi kwe- $ 0.040 kunye ne- $ 0.060
DOGE iqhubekile nokuhamba kwayo kuluhlu oluhamba phakathi kwe- $ 0.040 kunye ne- $ 0.060. Ngomhla wesibhozo ku-Matshi, iinkunzi zeenkomo zaphula intshukumo ebophelelayo kodwa uptrend awuzange uqhubeke. Uxinzelelo lokuthengisa lutyhale ixabiso kwi-zone eboshwe ngumda. Okwangoku, i-DOGE iwela kwinqanaba lamaxabiso asezantsi. Ukuhamba okuboshwe kwinqanaba kuya kuqhubeka kwiintsuku ezimbalwa ezongezelelweyo.
I-DOGE ikwinqanaba lama-53 leNdawo yamandla esiNxulumeneyo kwisithuba se-14. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgca osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zithambeka ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto iyehla. Emva koqhekeko ngo-Matshi 9, amaxabiso alungisiwe anyuka ukuya kubuyisa i- $ 0.058 ephezulu. Ngo-Matshi i-9 yehla, umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwa kwinqanaba le-1.272 ukongezwa kweFibonacci kunye nokubuyela umva. Ixabiso eliphantsi le- $ 0.0539.
I-DOGE iphakame ngaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Ii-SMAs zijinga phezulu.
I-DOGE isatshintsha-tshintsha phakathi kwe- $ 0.040 kunye ne- $ 0.060. Kutshanje, iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukugcina amandla akhulayo njengoko amaxabiso abuye abuyela kwindawo eboshwe kuluhlu. Imakethi iyawa kodwa ukunyuka okuya phezulu kuya kuqhubeka kwakhona ukuba ixabiso liwa kwaye lifumana inkxaso ngaphezulu kwe- $ 0.054.
I-Dogecoin (DOGE) yehla yenyuka kuLuhlu, uLwalathiso lwamaxabiso aluqinisekanga
DOGE Ixabiso liboshwe phakathi kwe- $ 0.040 kunye ne-0.060 yeedola. Ukusukela nge-26 kaFebruwari, imakethi ibonakaliswa ziziphatho zezibane ezincinci zomzimba ezibizwa ngokuba yiDoji kunye ne-Spinning tops. Iziphatho zezibane zichaza ukuba abathengi kunye nabathengisi bafikelele kwixesha lokungazithembi.
IDOGE-Itshathi yemihla ngemihla
I-DOGE ikwinqanaba lama-50 leSalathiso saMandla esiNxulumene nesiKhokelo sexesha lama-14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zijike ngokuthe tyaba zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto isezantsi. Ngomhla wesi-3 ku-Matshi ukwehla, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-50%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwa kwinqanaba le-2.0 kwaye ibuye umva. Ukusuka kwintsebenzo yexabiso, imarike ibuyisa umva ngaphezulu kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.050.
IDOGE-1 Itshathi yeYure
I-DOGE iphakame ngaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ithengisa kwindawo ethe kratya kwintengiso. Abathengi basakhulayo ukutyhala ingqekembe phezulu kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Ii-SMAs zijinga phezulu.
I-DOGE ngoku iyadityaniswa ngaphezulu kwenkxaso ye- $ 0.050. Ingqekembe isaza kuhamba njengoko ivalwe kuluhlu. I-cryptocurrency iya kuhamba xa ixabiso liphuka ngaphezu kwe-0.060 yokumelana.
Imizabalazo ye-DOGE yokuGcina i-Bias ejikeleze i-Beyond ngaphaya kwe-0.050 yeNdawo yoKuhlangana
Uhlalutyo lwamaxabiso e-DOGEUSD-ngoFebruwari 24
The 'Meme Coin', Ixabiso leDogecoin (DOGE) libuyile ukusuka kwidiphu yakutshanje ukuya kwi-0.0408 yeedola kusuku olungaphambili. Ngaphandle kokuchacha, i-DOGE ayikabikho ehlathini okwangoku, ngakumbi ngobuchwephesha kunye nakwi-chain-chain barriers ukuqonda. Ngexesha lokushicilela, i-DOGE ihleli kwi- $ 0.0536 kutshintshiselwano lweBinance, itshathi ye-TradingView ibonisa.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 0.0818, $ 0.0728, $ 0.0657
Amanqanaba enkxaso: $ 0.0408, $ 0.0350, $ 0.0280
I-DOGEUSD yexesha elide iTrend: Ukulinganisa
U-Dogecoin okwangoku usokola ukuqokelela umfutho kwingingqi ye-confine ye-0.050 yeedola ngaphandle kokudlula okwedlulileyo kwezantsi kwinqanaba le-0.0408 yeedola. Inqanaba lenkxaso yengqondo lihlala liphakathi kwe- $ 0.035 kwinqanaba eliphantsi, kodwa ukuba oko kwaphula ikhandlela lemihla ngemihla kufutshane apha ngezantsi, iya kuthi ibuyele kumgangatho wayo ophantsi wenkxaso ejikeleze i- $ 0.028.
Isibini se-DOGEUSD, nangona kunjalo, sinokonwabela ixesha lokukhula ngamandla, ukuba sinokujolisa kwinqanaba le-0.06 leedola lokumelana ngaphambi kokujonga kwi-0.0728 nangaphaya. Ukuba i-DOGE ihlupheke ukwehla kwexabiso elingaphantsi kweedola i-0.50, iya kuthi ihlupheke kakubi njengoko iya kuqinisekisa ukwehla kwezantsi kunye nezantsi.
I-DOGEUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Ukulinganisa
Itshathi yeeyure ezi-4 ibonisa ukurhweba kwe-DOGE ngaphakathi kwemida yokunyuka kwenkxaso. Ukuxhamla kutsha nje ngaphezulu kwesithintelo sethuba elikufutshane kwi-0.05 yeedola yongeza ubungqina kumbono oguqukayo. Nangona kunjalo kwicala elisezantsi lokufumana ukubambeka, iinkunzi zeenkomo ze-DOGEUSD kufuneka zibambe ngaphezulu kweli nqanaba libalulekileyo ukunqanda ukwehla okunokubangela ukuba uDogecoin abuyele kwi-0.04 yeedola.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ikhefu phantsi kwenkxaso yenkqubela phambili enyukayo inokuhlaziya ukophuka ukuya kwi- $ 0.04. Kwelinye icala, ilahleko engaphantsi komndilili ohambahambayo i-13 inokubangela ilahleko enkulu, mhlawumbi yomelele ngokwaneleyo ukuba ityhoboze kumda wendlela esezantsi kwaye wandise umlenze we-bearish uye kwi-0.035 yeedola.
tags DLULA, Uhlalutyo Technical
I-Dogecoin (Doge) ibuyela kwi-0.047 yeedola esezantsi, inokuthi iqhubeke kwakhona ngokuHamba
Nge-7 kaFebruwari, u-Dogecoin wadibana ne- $ 0.09 ephezulu. Iinkunzi bezingakwazi ukuqhubeka nokunyuka njengoko ziye zagxothwa. I-crypto ibuyela umva kwaye iwele kwinqanaba le-0.047 yeedola. Kukho izibane zokukhanyisa njengoko ingqekembe izama ukunyuka. Nangona kunjalo, ukuba inkxaso yangoku ibambe, i-altcoin iya kuphinda inyukele phezulu.
IDOGE / i-USD -Itshathi yansuku zonke
I-DOGE ikwinqanaba lama-53 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50. I-crypto iyakwazi ukunyuka ngaphezulu. Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 zee-SMA zihamba ziye phezulu zibonisa imeko yangaphambili.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-crypto isezantsi. Ingqekembe yawa emva kokuphinda uzame inqanaba leedola elingu-0.09. Ngomhla ka-15 kuFebruwari, idowntrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisa le-78.6% yeFibonacci. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba i-DOGE iya kuwa kwinqanaba le-1.272 kwaye ibuye umva. Ingqekembe iya kubuyela umva iphantsi kwe- $ 0.036.
I-DOGE iwele ngaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ithengisa kwindawo ethe kratya kwintengiso. Abathengi basakhulayo ukutyhala ingqekembe phezulu kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Ii-SMAs zijinga phezulu.
I-cryptocurrency ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish njengoko ingqekembe yehle kwindawo ethe kratya kwintengiso. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukubuyela umva kwinqanaba le-0.036. Silindele ukuba ingqekembe inyukele phezulu.
tags DOGE, UMHLA / i-USD, I-DOGECOIN, Uhlalutyo lwamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eDogecoin-Februwari 1
I-Dogecoin (DOGE / USD) yabona irali yasebusuku malunga ne-80%, ebonisa ukuba icandelo le-Wall Street Bet's crypto lisenezicwangciso ze-cryptocurrency. I-Dogecoin yeza nembalasane kulandela impompo ye-900% nge-28 kaJanuwari, eyathi yenza ukuba i-meme yedijithali ibe kwinqanaba leshumi ngobukhulu ngokusekwe kwimali eyinkunzi yentengiso okokuqala ukusukela ngo-2015.
Njengoko irali enkulu yaqala ukuphulukana namandla, abarhwebi abaninzi bayicoca ngokukhawuleza inzuzo yabo, njengoko kubonakala ngathi abatyali mali ngoku bafuna enye into yokutyala imali.
Ispike ekuqaleni saqala xa utshintshiselwano luthintela abathengisi ekufumaneni ii-AMC kunye neeStockStop ngoJanuwari 28, nto leyo ibangele ukuba abatyali mali bakwaReddit bafune ezinye iindlela zotyalo-mali ezinje ngesilivere kunye nezinye zexabiso eliphantsi.
NgoJanuwari 28, umsebenzisi we-Twitter “Usihlalo weWSB” Wathumela umyalezo kubalandeli bakhe abangama-750k, esithi "Ukhe waya kwidola?" Lo mbuzo ubangele irali enkulu kwi-DOGE, ngaphandle kokuba i-crypto ingenakuphuculwa komgaqo ukusukela ngo-2015.
Iimpembelelo ezininzi zosasazo lwasentlalweni zazingonelisekanga kukuthenga eyona ntlanganiso iphakamileyo, ebonisa ukuba isiphithiphithi sokuqikelela siphelile.
Kuphantse kube nzima ukuphawula esona sizathu seepikhi, kuthathelwa ingqalelo ukuba zininzi iinethiwekhi zentlalo, ngakumbi amaqela abucala eTelegram kunye neapps zorhwebo, abathathe inxaxheba ngokuthatha inxaxheba kwintengo.
Oko kwathethi, ukulinganisa imisebenzi yemidiya yoluntu kunokuba yinto eqhelekileyo yokuqikelela.
Amanqanaba aphambili e-DOGE kuBukela-ngo-Februwari 1
I-DOGE / i-USD ibonakala ngathi idityanisiwe phakathi kwe- $ 0.0450 kunye ne- $ 0.0350, njengoko amandla ayo okuqhubela phambili ephulukana nomphunga. Intshukumo yexabiso ledijithali yakutshanje yenze ipateni engunxantathu, ebonisa ukuba i-spike (kuyo nayiphi na indlela) ikufutshane nekona.
Oko kwathethi, silindele ukubuyela kwi-0.350 yeedola exhasa iiyure ezizayo, apho isaphulelo kumanani ayi-0.0500 ajikelezayo nangaphezulu kunokwenzeka.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.0450, $ 0.0500, kunye ne- $ 0.0600. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0350, $ 0.0270, kunye ne- $ 0.0220.
Imali iyonke yentengiso: $ 1 zezigidi
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 4.7 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 0.47%
tags I-DOGECOIN, DLULA, iindaba